ပင်တိုင်ကဏ္ဍ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 814
အားလုံးရဲ့ ရင်ထဲမှာ သူရှိတယ် … ။ တပွင့်ချင်း ဖွင့် ဖတ်မလား တလွှာချင်းစီ ရင်ခုန်ကြည့်မလား …။ အသံမှာ ဒေါသစွက်ရင် အဲဒီခေတ်ရဲ့ အပြစ်မဲ့ မျက်ရည်ဘက်က စာနာပါ၊ ရနံ့မှာ သွေးစိမ်းရှင်ညှီ သင်းနေခဲ့ရင် ဒီနေ့ခေတ်ရဲ့ မတရားမှုတွေကို သင့်နှလုံးသားက လက်မခံလိုက်ဖို့ ကြိုးစားပါ။ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်း ကူမိုးကြိုး – “၈၈ – ၂၄နှစ်” မကြေပွဲမှသည် အောင်ပွဲဆီသို့ (လေလား) သြဂုတ် ၈၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်းကူမိုးကြိုး – ထိုင်ရာက မထနိုင်တာ အာဏာ သြဂုတ် ၇၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်းကူမိုးကြိုး – ဆေးသကြားစိမ်ထားတဲ့ ဒီမိုကရေစီ မုိုးခါးရေတွေ ရမယ် (ဂျာနယ်တွေ ဂျာနယ်တွေ …) သြဂုတ် ၄၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No related posts.
POEM FOR NYC 24th 8888 DAY ပျံ သန်း နေ တဲ့ မြစ် ၊ စီး ဆင်း နေ တဲ့ ငှက် အောင်ဝေး၊ သြဂုတ် ၄၊ ၂၀၁၂ (ကျား) ပျံသန်းနေတဲ့မြစ်။ (မ) စီးဆင်းနေတဲ့ငှက်။ (ကျား) စီးဆင်းနေတဲ့ငှက်။ (မ) ပျံသန်းနေတဲ့မြစ်။ (ကျား) ကျနော်တို့စခဲ့ကြတယ်။ (မ) ကျမတို့စခဲ့ကြတယ်။ (ကျား) ကျနော်တို့စခဲ့ကြတယ်။ (မ) ကျမတို့စခဲ့ကြတယ်။ (ကျား) ရှစ်လေးလုံးက၊ စ၍စီးဆင်း၊ မြစ်တစင်း။ (မ) ရှစ်လေးလုံးက၊ စ၍ပျံသန်း၊ ငှက်ရဲ့ လမ်း။ (ကျား)...
ရတနာများ ကျော်သူ၊ နာရေးကူညီမှုအသင်း သတင်းမှတ်စုလှုပ်ရှားမှုများ သြဂုတ် ၃၊ ၂၀၁၂ အမိဝမ်းမှ မွေးလာခဲ့ပြီဆိုကတည်းက သင်ကြားခြင်းနှင့်စခဲ့ရသည်ဟုပြောလျှင် မှားမည်မဟုတ်။ မိဘများက မွေးကာစ သားသမီးတို့၏ လေ့လာသင်ယူနေသော အချိန်တွင် “ဖေဖေ၊ မေမေ” ခေါ်တတ်စေရန်၊ လမ်းလျှောက် တတ်စေရန်စသဖြင့် သင်ပေးခဲ့သည်။ ထို့အရွယ်မှစ၍ (၃) နှစ်အရွယ်တွင် မိခင်၊ဖခင်တို့၏ သင်ကြားပေးမှုဖြင့် မလုံလောက်သောကြောင့် မူကြိုကျောင်းသို့ ပို့ဆောင်ကာ ဆရာ/ဆရာမတို့၏ ပညာသင်ယူမှုကို ခံယူကြရသည်။ ထို့ကြောင့် မွေးစကတည်းက ကလေးတွေမှာ ဆယ်တန်း အရွယ်ထိ နေအိမ်နှင့်ကျောင်း၊ ကျောင်းနှင့်ကျူရှင် ထိုမှ တဖန် စာမှ စာ ဖြစ်နေသောကြောင့် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲအောင်ပြီးချိန်တွင်လည်း လူ့လောကအကြောင်း၊ ဘဝအကြောင်း လက်တွေ့မသင်ကြားရသေးဘဲ ကွန်ပြူတာ(Basic)သင်တန်း၊ အင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တန်း စသဖြင့် သင်ကြားကြရသည်မှာ...
Page 814 of 842«1...812813814815816...842»